छाला र धूम्रपान - असरहरु, संक्रमण र प्रभाव • Health News Nepal
✍️ डा विकास पौडेल, MBBS, MD, चर्मरोग विशेषज्ञ,
धूम्रपानले शरीरका सबै प्रणालीहरूमा नराम्रो असर पार्छ। धुम्रपानको प्रयोग सबैभन्दा पहिले सन् १४९२ मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिकी आप्रबासीहरुले पातहरुलाई सुर्तिजन्य रुपमा प्रयोग गरेको देखेकोलाई मानिन्छ। धूम्रपान लगायत सुर्तिजन्य धुँवामा हजारौं किसिमका हानिकारक पदार्थहरू हुन्छन् जसले सम्पूर्ण शरिरलाई हानी नोक्सानि गर्दछन् ।
निकोटिन आफै नै पनि हानिकारक हुन्छ र यसले पनि छाला र कपाललाई असर गर्दछ । यसले फोक्सोको बिभिन्न रोग, हृदयरोग मात्र नभई बिभिन्न छालारोग निम्त्याउछ। यसले गर्दा घाउहरु ढिलो निको हुने र छालामा संक्रमणक बढाउने पनि गर्छ । धूम्रपानले अन्य थुप्रै चर्मरोगहरु जस्तै सोरायसिस (Psoriasis), ल्युपस (Lupus) हिड्राडिनाइटिस सपुराटिवा (Hidradenitis suppuritiva) आदि गराउन वा बढाउन सक्छ।
धूम्रपानले छालालाई कसरी बिगार्छ?
सुर्तिजन्य धुवाँले Oxidative Stress उत्पन्न गर्दछ जसले गर्दा छालामा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ । यसले रोग प्रतिरक्षा प्रणालि Immune system लाई समेत असर गर्दछ। Metalloproteniase (MMP-1) नामक ईन्जाईमलाई सक्रिय गराउछ जसले छालामा भएको Collagen (कोलाजेन) लाई बिगार्दछ। यसले छालाको इलास्टिक फाइबर (ईलास्टोसिस) मा समेत परिवर्तन ल्याउछ । छालाको लचकदार फाइबरहरूमा परिवर्तन आउछ। यसले रक्तवाहिनी नलीको संकुचन गरी छालामा रगत आपूर्ति कम गराउछ, जसले गर्दा छाला बुढो देखिन्छ।
धूम्रपानले छालामा हुने असरहरु
छालाको रंग असमान हुन्छ।
छाला सुख्खा र भद्दा देखिन्छ ।
अनुहारमा चाउरी पर्छ।
औंलाहरु र नङहरु पहेंला हुन्छन् ।
दाँत र ओठ कालो हुन्छ।
जिब्रोमा Hairy Tongue हुनसक्छ।
धूम्रपान र संक्रमण
धूम्रपानको कारणले छालामा विभिन्न संक्रमण देखिन्छ। जस्तै
घाउ संक्रमण (ब्याक्टेरिया)
ढुसि (क्यान्डिडा) संक्रमण
भाइरल संक्रमण, विशेष गरी ह्युमन पेपिलोमा भाइरस (HPV)
धुम्रपान र छालाको क्यान्सर
धुम्रपान ले Squamous cell carcinoma भनिने छालाको क्यान्सरको जोखिमलाई दोब्बर गर्दछ।
अन्य रोगमा ल्युकोप्लाकिया (Leucoplakia) र मुखको तथा ओठको क्यान्सर पर्छन्। तर धूम्रपानले Basal cell carcinoma को जोखिम भने बढाउँदैन।
धुम्रपान र सोरायसिस
धूम्रपान गर्नेहरूमा सोरायसिस बढी देखिन्छ।
अन्य छालाका रोगहरु
चाडै कपाल फुल्ने (Premature graying of hair)
Leg ulcers खुट्टाको घाउ
Cutaneous Lupus Erythematosus, Discoid Lupus
साना रक्तनलीहरूका रोग Thromboangitis obliterans (Buergers Disease)
औषधिहरूमा धुम्रपानको प्रभाव
चुरोटमा भएको पोलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनले कलेजोमा CYP1A2 ईन्जाइमहरू बढाउछ। यी ईन्जाइमले विषाक्त पदार्थहरू नष्ट गर्दछन्। तसर्थ, धेरै धूम्रपान गर्नेहरूलाई औषधीहरू धेरै मात्रामा आवश्यक पर्दछ। यसमा इन्सुलिन, दुखाइ कम गर्ने औेषधीहरु, एन्टिसाइकोटिक्स, एन्टिकोआगुलेन्ट्स, क्याफिन आदि पर्छन्।
धूम्रपान गर्नेहरूमा मदिरा सेवन र क्याफिनको सेवन औसत दुई गुना भन्दा बढी हुन्छ।
म कसरी धूम्रपान रोक्न मद्दत लिन सक्छु?
यदि तपाईं धुम्रपान रोक्न चाहनुहुन्छ वा छोड्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले डाक्टरसँग सल्लाह लिनसक्नुहुन्छ। यसको लागि विभिन्न औेषधीहरु वा माध्यमहरु हुन्छन् । जस्तै
१ निकोटीन प्रतिस्थापन
निकोटीन युक्त प्याचहरू, गम, लोजेन्जेज, स्प्रे वा इनहेलरहरूले मद्दत गर्न सक्छन्। विभिन्न खाले निकोटिन एगोनिस्ट चक्कीहरु जस्तै varenicline वा Dopamine reuptake inhibitors, bupropion ले फाईदा पुर्याउन सक्छ।
२। ई-सिगरेटहरू भन्नाले इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डेलिभरी प्रणाली हो। तर यसले पनि युवाहरूमा लत लगाउन सक्छ र मस्तिष्कको विकास र क्यान्सर लगायत सम्भावित दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखाउन सक्छ।
लेखक: ✍️ डा विकास पौडेल, MBBS, MD, चर्मरोग विशेषज्ञ, Assistant Professor, National Medical College, Contact: [email protected] and www.facebook.com/vikashderma/
Tags: #smoking #disease #Skin Care